Kudya Kwakapfava - Ndezvipi Zvekudya Kuti Udye Uye Izvo Zvisiri? | Kudya kweNutri
Kana iwe wakambonzwa nezve iyo kudya kwakashata, Chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kuziva ndechekuti harisi zano rekudzora uremu raunofanira kurasikirwa naro akateedzana emakirogiramu sezvazvinoitika nemamwe marudzi ezvikafu zvakaita se kudya kweAtkins kana iyo Perrone. Kana iwe uchifarira uye uchida kuziva zvakawanda nezve izvo zvakapfava kudya, ipapo ini ndichatsanangura zvese Zvaunofanira kuziva nezvazvo, zvarinosanganisira uye vanhu vacho ndivanaani kuti vanofanira kuitevera.
1 Chii chinonzi chinyoro chikafu?
2 Ndezvipi zvekudya zvaunogona kudya pane zvakapfava kudya?
3 Zvekudya izvo zvinorambidzwa uye izvo zvinofanirwa kudzivirirwa mune bland kudya
4 Semuenzaniso menyu pane chinyoro chikafu
5 Tevera chikafu chine hutano uye chakaringana
6 Mazuva ano matipi ezve bland chikafu
Chii chinonzi chinyoro chikafu?
Kudya kwakapfava chirongwa chekudya cheimwe nguva iyo vanachiremba vanoraira pamberi pezvirwere zvakasiyana zvekudya kana mushure meimwe mhando yekupindira kwekuvhiya. Chiremba anosarudza rudzi urwu rwekudya, kuitira kuti murwere inogona kudya chikafu zviri nyore uye kuti unogona kutsenga uye kumedza pasina dambudziko. Muzviitiko zvakawanda kudya uku kunowanzo teverwa kana kwapera chikafu chemvura uye murwere akagadzirira kumedza zvishoma nezvishoma uye nokungwarira. Kuumbwa kwekudya, ichasiyana zvichienderana nekiriniki mamiriro emurwere.
Ndezvipi zvekudya zvaunogona kudya pane zvakapfava kudya?
Kune huwandu hukuru hwechikafu chakakodzera zvinyoro nyoro uye izvo zvakanaka kuisa mukati merudzi urwu rwekudya, umo munhu anozvitevera mari kutsenga, kumedza kana kuda kugaya uye kusareruka kugaya. Zvimwe zvekudya izvo zvinogona kuve chikamu yezvokudya zvakapfava Ndizvo:
Zviyo porridge senge oatmeal kana gorosi semolina.
Pasika yakabikwa kusvikira kugadzirwa kwakatsetseka uye kuri nyore kudya kunowanikwa.
Frutas nyoro uye nyoro semabhanana akaibva, kantaloupe, kana visi.
Michero yakabikwa kana yakabikwa senge mapepa kana maapuro.
Miriwo yakabikwa isina ganda uye dzinogona kunge dzakakwenenzverwa kunge karoti kana kolifulawa.
Zvigadzirwa zvemukaka kunge yogati kana kirimu chizi inopararira.
Iyi ingori mienzaniso mishoma yezvikafu zvaunogona tora pasina dambudziko munhu ari kutevera chinyoro chikafu.
Zvekudya izvo zvinorambidzwa uye izvo zvinofanirwa kudzivirirwa mune bland kudya
Kune zvikafu zvinoverengeka zvaunofanira kudzivisa paunenge uchitevera rudzi urwu rwekudya sezvo rwakashata kugaya kwakanaka kana zvinonetsa kugaya kana kutsenga. Zvimwe zvekudya zvakarambidzwa ndezvi:
Chingwa chine mhodzi nezviyo zvakakwana.
Nyemba dzine makanda akaomarara senge nhunzi kana bhinzi.
Maapuro, mapichisi kana chinanazi.
Nyama tsvuku, huku kana turkey.
Sausages kana hamburger.
Semuenzaniso menyu pane chinyoro chikafu
Vanhu vazhinji vanofunga kuti bland kudya kunogona kukuwana iwe iva anofinha uye akaomarara, zvakadaro pazasi ndiri kuzokuratidza mimwe mienzaniso ye mamwe mamenu iyo yaunogona kunakidzwa nayo nezvikafu zvakasiyana panguva iyi yemhando yekudya uye idya zvishoma zvese.
Mazai akasanganiswa ne grated chizi, yakanyungudutswa chizi uye zvishoma vise.
Yai yakabikwa uye yogati yakasviba.
Smoothie yakagadzirwa nemukaka, bhanana, cocoa poda, yogati, uye inotapira zvishoma kana shuga.
Tuna saladi ine mayonnaise uye zvimwe zvinonhuwira. Apple yakachena.
Yai saladi ine mayonnaise nezvinonhuwira. Melon Saladi.
Pea puree. Mapeya mune inotapira.
Turkey inotenderera ne avocado zvimedu.
Pasita Saladi Iine Tuna.
Salmon yakabikwa ine mbatata.
Sipinachi quiche uye kolifulawa puree.
Tevera chikafu chine hutano uye chakaringana
Izvo zvakakosha kuti iwe uzive kuti kuva nechikafu chisina kunyorova hazvipesane nekudya chikafu che mhando ine hutano uye yakaenzana umo muviri wako unogashira zvese zvinovaka muviri zvinodiwa yekushanda kwakanaka kweizvozvo. Haugone kupotsa mapoka ezvokudya yakakosha semichero, miriwo, zvigadzirwa zvemukaka kana zviyo. Ipapo ndichakupa a nhevedzano yemazano kuitira kuti muviri wako ugamuchire kudya kunovaka muviri:
Dzivisa kudya chikafu chakawandisa nguva dzese akapfuma mushuga, kunyanya idzo dzisina kukosha kwehutano.
Sanganisa zvekudya mune zvaunodya of colors (girini, yero kana orenji) kuve nechokwadi chekudya kwakakwana kwe mavitamini mumuviri wako.
Unofanira kudya zvishoma anenge 1.200 macalorie pazuva. Kana iwe muzuva rako zuva nezuva uchidya mashoma macalorie pane ayo akaratidzirwa pamusoro, chakanyanya chakajairika ndechekuti muviri wako tanga kurasikirwa nemhasuru nenzira inofambira mberi.
Ngwarira zvakanyanya kana zvasvika kune kudya mafuta. Ichokwadi chekuti urikutevera chikafu chisina kunyorova hazvireve kuti une rusununguko rwakakwana rwekudya ese marudzi emafuta. Kuti udzivise kuwanda kwemafuta akadaro, zviri nani kudya zvigadzirwa zvemukaka zvakakwana skimmed kana skimmed uye shandisa muto wenyama mupe iwo akachena kuravira kuri nani.
Mazuva ano matipi ezve bland chikafu
Kana nekuda kwezvikonzero zvakasiyana iwe uchitevera kudya kwakapfava, zvakakosha kuti usarase ruzivo rwezvimwe yazvino madhairekitori ezvokudya kana matipi Edza kutsenga zvakanaka uye udye zvishoma, kuitira kuti zvive nyore kugaya sezvazvinogona uye usina Matambudziko edumbu zvakajairika segasi rinogumbura. Kana wapedza kudya, edza kuzorora kwemaminetsi mashoma uye gonesa kugaya kwakadai.
Chinhu chinonyanya kurairwa ndechekuchengetedza kudya kwakapfava panguva anenge mazuva matatu 3 0 uye wozoenda zvishoma kana zvishoma kuunza mamwe marudzi ezvokudya kuti uwane kudya kwakajairika kwaunogona kudya marudzi ese e zvinodiwa zvinovaka muviri uye mavitamini yemuviri wako. Kana iwe ukacherekedza kuti mushure memazuva ano, iwe uchiri nematambudziko kana uchidya zvimwe zvekudya, iwe unofanirwa kuenda kuna chiremba wako waunovimba naye.
Sezvawaona uye kuverenga mune ino chinyorwa, zvinokwanisika kuita kudya hutano, hwakadzikama uye hwakapfuma kunyangwe iwe uri pane chinyoro chikafu. Kutevera nhevedzano yenhungamiro uye ne kugadzirwa kushoma Iwe unogona kugadzira inonakidza menyu iyo inokubatsira iwe kupora nekukurumidza kubva kune ako matambudziko ehutano uye inopa yakanaka zvinovaka muviri kumuviri wako.
Pazasi ini ndinokuratidza vhidhiyo mune zvese zvichajeka uye ndezvipi zvekudya zvaunogona kusanganisira pane iyi mhando yekudya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Chipo chekubhadhara » Kudya kwakapfava
Iyi ndiyo kurudziro yakaipisisa yechikafu chinyoro chandati ndamboverenga.
Matipi ekudzora varicose mutsinga negirini uye tsvuku matomatisi
Pisa mafuta uye macalorie nekufamba